Xildhibaan Xasan Macalin “Madaxda hada talada heysa haka shaqeeyaan sidii ay si nabad ah talada ugu wareejin. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Wararka Xildhibaan Xasan Macalin “Madaxda hada talada heysa haka shaqeeyaan sidii ay si...
Xildhibaan Xasan Macalin “Madaxda hada talada heysa haka shaqeeyaan sidii ay si nabad ah talada ugu wareejin.
Xildhibaan Xasan Macalin oo ka tirsan golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku amaanay Madaxweynayaashii todobaad iyo Sideed ee dalka, sida kaalin uga soo qaateen dowladninada dalka.
Hadal uu ka jeediyay Munaasabadda daah furka Madasha Xisbiyada Qaran oo Khamiistii lagu qabtay Muqdisho ayuu ka sheegay sida uu shariif Sheekh Axmed isugu howlay in si nabad ah uu talada ku wareejiyo, markii uu dhamaaday muddo xileedkiisa, taasoo ay cashir u noqotay dalal badan oo Afrika ah.
“Sheekh Shariif waa la soo shaqeeyey waan aqaanaa isaga iyo Madaxweyne Xasan waxey ku amaanan yihiin sideey talada si
Nabad u wareejiyeen hadana waxaan u joogno wa intii waana wax Soomaaliya waayadaan looga bartay in talada la isku wareejiyo”ayuu yiri Xildhibaan Xasan Macalin.
Xildhibaan Xasan Macalin ayaa carabka ku adkeeyay sida lagama maarmaanka ay u tahay in waqtigeeda u dhacdo doorashada soo socoto, waxaana madaxda hada talada heysa ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii ay si nabad ah talada ugu wareejin lahaayeen nidaamka cusub ee la soo dooran doono marka la gaaro sanadka 2020/21.
Si kastaba, Madaxda Madasha Xisbiyada Qaran oo ah madal ay ku bahoobeen inta badan mucaaradka dowladda ayaa sheegay inay u taagan yihiin sidii ay dowladda ugula xisaabtami lahaayeen ku dhaqanka Dastuurka iyo sidii dalka loo gaarsiin lahaa doorashooyin waqtigooda ku dhaca.